एक वर्षमा २३ सय प्रहरी कारबाहीमा, २७० जनाको जागिर गयो :कसलाई कस्तो कारबाही ?::mirmireonline.com
एक वर्षमा २३ सय प्रहरी कारबाहीमा, २७० जनाको जागिर गयो :कसलाई कस्तो कारबाही ?
काठमाडौं, २८ साउन |
एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दुई एसएसपी, एक एसपी, दुई डिएसपी र २७ जना इन्स्पेक्टर विभागीय कारबाहीमा परेका छन् ।
आव ०७२/७३ मा एक हजार दुई सय ७२ प्रहरी विभागीय कारबाहीमा परेका थियो । तर, पछिल्लो वर्ष कारबाहीमा पर्नेको संख्या झन्डै दोब्बर पुगेको छ । कारबाही बढ्नुले संगठनभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । आव ०७३/७४ मा देशमा अपराध पनि अघिल्लो वर्षभन्दा करिब १० प्रतिशत बढेको थियो । नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार सात सय १९ प्रहरी छन् । जसमध्ये करिब ३ प्रतिशत प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् ।